June 22, 2020 - Khitalin Media
ပတ်သတ်မှုရှိခဲ့ရင်လည်း လွတ်လပ်သူတွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် လူမှုကျင့်ဝတ် ဖောက်ဖျက်ခဲ့တာမရှိပါဘူးဆိုတဲ့ မယ်လိုဒီ
June 22, 2020 Khitalin Media 0
စိတ်ပူပင်နေကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးကို အသိပေးပါရစေရှင်ကျွန်မအနေနဲ့ မတူညီမှုများစွာနဲ့ ညှိမရတဲ့အနေအထား အခြေအနေတွေကြောင့် လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကတည်းက အမျိုးသားနဲ့ လမ်းခွဲခဲ့ကြတာပါ.. သားလေးနဲ့ မိဘများရဲ့မျက်နှာ၊ ထောက်ထားစရာတွေရှိတာကြောင့်သာ တရားဝင်မထုတ်မပြောခဲ့တာပါ.တစ်မိုးထဲအောက်၊ မိဘများနဲ့အတူ လွတ်လပ်စွာနေထိုင်ခဲ့ကြတာ ကာလအတော်ကြာပြီဆိုတာ ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေတွေ သိကြပါတယ် သားလေးကိစ္စရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပွဲလမ်းတွေရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ဖြစ် သူနဲ့ကျွန်မက သားလေးရဲ့မိဘအနေနဲ့ရော၊ မိတ်ဆွေကောင်းအနေနဲ့ရော မိသားစုလို ပုံမှန်သွားလာတာလည်း […]
တနင်္လာသား/သမီးများအတွက် ဇွန်လ(၂၂)ရက်မှ (၂၃)ရက်ထိ တစ်ပါတ်စာဟောစာတမ်း
(၇)ရက်သားသမီးများအတွက်တစ်ပါတ်စာဗေဒင် ဇွန်လ(၂၂)ရက်နေ့မှ(၂၉)ရက်နေ့အထိ တနင်္လာသား/သမီးများအတွက်တစ်ပါတ်စာဟောစာတမ်း ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာမိဆွေကောင်းဆရာကောင်းတွေကြုံတွေရမည်။ ပညာရေးသင်တန်းကိစ္စစာမေးပွဲကိစ္စအထူးကောင်းမွန်ပါသည်။ စပ်တူအလုပ်တွေလည်းအောင်မြင်ပါလိမ့်မည်။ စာချုပ်ရမည့်ကိစ္စတွေလည်းအဆင်ပြေလိမ့်မည်။ ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးကောင်းများလည်းကြုံတွေ့ရမည်။ ငွေကြေးကံလည်းအလွန်ကောင်းနေပါသည်။ ဘာသာရေးလုပ်ငန်း၊ဘုရာဖူးခရီးတွေလည်းပေါ်လာမည်းအလွန်ကောင်းပါသည်။ အလှူမင်္ဂလာပွဲတွေလည်းပေါ်လာမည်။ အထည်ထီးဖိနပ်လုပ်ငန်းတွေတော့သတိထားပြီးလုပ်ပါ။ စက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်မည်။ အိမ်ထောင်ရှင်များအဆင်မပြေမှုများတတ်သည်။ ငယ်ရွယ်သူများအချစ်ရေးချစ်သူနှင့်အဆင်မပြေမှုလေးတွေဖြစ်ပြီးမှပြေလည်သွားလိမ့်မည်။ သင့်ကျန်းမာရေးကလေထိုးလေအောင့်ဖြစ်တတ်သည်။ သင့်အတွက်ကံကောင်စေသောအရောင်မှာခရမ်းရောင်ဖြစ်ပါသည်။ သင်ထီထိုးမယ်ဆိုရင်ကံကောင်စေမည့်ဂဏန်း၃၅အတွဲဟာသင့်အတွက်ကံကောင်းစေပါသည်။ သင့်အတွက်ကံကောင်းစေရန်ယတြာကိုလည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။ မိမိအိမ်ဘုရားတွင်စမူဆာ(၅)ခုလှူဒါန်းပြီးမိမိလိုရာဆုတောင်ပါ။ သင်၏ အခက်အခဲအားလုံးတို့ သည် ပြီးစီးအောင်မြင်ပါလိမ့်မည် ဟု […]
အနီရောင်ကိုမှ ကြိုက်တဲ့ မိန်းကလေးတွေဆီမှာသာ တွေ့ရတတ်တဲ့ အကျင့်စရိုက်များ
အနီရောင်ဆိုတာကတော့ ထင်ရှားမှုနဲ့ ရဲရင့်ခြင်းတွေကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ အနီရောင်ရဲ့ အဓိပ္ပါတွေထဲမှာ ယုံကြည်မှု၊ ပြတ်သားမှု၊ ခေါင်းဆောင်နိုင်စွမ်း၊ စိတ်ခံစားမှုပြင်းထန်ခြင်း၊ သတ္တိ၊ ဒေါသနဲ့ ဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်း မြင့်မားမှုတွေ ပါဝင်နေပါတယ်။ အနီရောင်ကြိုက်တဲ့ မိန်းကလေးတွေဆီမှာတော့ ထူးခြားတဲ့ ဒီလိုအရည်အသွေးတွေ ရှိလို့နေပါတယ်နော်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု အနီရောင်ကို ကြိုက်နှစ်သက်တတ်တဲ့ မိန်းကလေးအများစုဟာ […]
(၇)ရက်သားသမီးများအတွက်တစ်ပါတ်စာဗေဒင် ဇွန်လ(၂၂)ရက်နေ့မှ(၂၉)ရက်နေ့အထိ တနင်္ဂနွေသား/သမီးများအတွက်တစ်ပါတ်စာဟောစာတမ်း ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းအဖတ်ဖတ်ကအခွင့်ရေးကောင်းတွေပေါ်လာလိမ့်မည်။ အလုပ်တွေတိုးချဲ့သင့်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ကံတရားကမျက်နှာသာပေးတတတဲ့ကိန်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ ငွေဝင်မယ်ရွှေကံကောင်းမယ်။ အနုပညာအလုပ်အလှကုန်အလုပ်တွေအထူးအကျိုးပေးအောင်မြင်ပါလိမ့်မည်။ စပ်တူလုပ်ငန်းကိစ္စ၊စာချုပ်ရမည့်ကိစ္စတွေကတော့အထူးသတိထားပါ။ ကိုယ်တိုးတက်အောင်မြင်တဲ့အပေါ်မနာလိုအပြိုင်အဆိုင်တွေလည်းပေါ်လာလိမ့်မည်။ သတိထားပါ။ ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးများမရေမရာဖြစ်နေတတ်ပါသည်။ အောက်လက်ငယ်သာအကျိုးပေးပါလိမ့်မည်။ အိမ်ထောင်ရှင်များအိမ်ထောင်ရေးစိတ်ဝမ်းကွဲရတတ်သည်။ ငယ်ရွယ်သူများအချစ်ရေးသတင်းကောင်းကြားရတတ်သည်။ သင့်ကျန်းမာရေးကတော့ကောင်းနေပါသည်။ သင့်အတွက်ကံကောင်စေသောအရောင်မှာမိုးပြာရောင်ဖြစ်ပါသည်။ သင်ထီထိုးမယ်ဆိုရင်ကံကောင်စေမည့်ဂဏန်း၂၄အတွဲဟာသင့်အတွက်ကံကောင်းစေပါသည်။ သင့်အတွက်ကံကောင်းစေရန်ယတြာကိုလည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။ မိမိအိမ်ဘုရားတွင်ခရေ(၆)ညွန့်လှူဒါန်းပြီးမိမိလိုရာဆုတောင်ပါ။ သင်၏ အခက်အခဲအားလုံးတို့ သည် ပြီးစီးအောင်မြင်ပါလိမ့်မည် ဟု ကျွန်ုပ်မှ […]
ဒီအိမ်မက်တွေ မက်ခဲ့ရင် မဖြစ်မနေ ထီ ထိုးပါ …
ဒီအိမ်မက်တွေ မက်ခဲ့ရင် မဖြစ်မနေ ထီ ထိုးပါ … ထီ ပေါက်မယ့် အိမ်မက် (၁) အိမ်မက်မြင်မက်ရာတွင် ဝတ်ဖြူစင်ကြယ်နှင့် လူပုဂ္ဂိုလ် ကြီးဖြစ်စေ ကြွရောက်လာပြီးလျှင် သင်အလိုရှိသော ဆန္ဒပြည့်ဝစေပါမည်။တရားကိုသာ အားထုတ်ပါဟု မိန့်ဆိုခဲ့သည်ဖြစ်စေ၊သို့မဟုတ် မည်သည့်ကိစ္စကို ဆောင်ရွက်၍ မည်သို့ပြုလုပ်ပါဟု မှာကြားခဲ့သည်ဖြစ်စေ၊အိမ်မက်တွင် မြင်မက်ရပါက နတ်ကြီး၊ဝိဇ္ဇာကြီးများနှင့်တွေ့ရသော […]
ချဉ်ပေါင်၏ ကျန်းမာရေး လျို့ဝှက်ချက် ချဉ်ပေါင်ပင် တစ်ပင်လုံးကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ချဉ်ပေါင်ရွက်ကို ချဉ်ပေါင်ကြော်၊ ဟင်းချို ၊ ချဉ်ရည်ဟင်း…စသည့် ထမင်းမြိန် ဟင်းလျာများအဖြစ် စာလေ့ရှိကြပါသည်။ တချို့ အရပ်ဒေသများ တွင် အရွက်ရင့်ရင့်၊ အပွင့်နှင့် အသီးတို့ ကို နေပူပူ တွင် အခြောက်လှန်း […]
ကမ်ဘာကြျော နပနျးသမားဘဝနဲ့ စညျးစိမျတှကေို စှနျ့လှတျပွီး ရဟနျးဝတျနတေဲ့ ကိုယျတျောနှဈပါး….
ကမ္ဘာကျော် နပန်းသမားဘဝနဲ့ စည်းစိမ်တွေကို စွန့်လွှတ်ပြီး ရဟန်းဝတ်နေတဲ့ ကိုယ်တော်နှစ်ပါး လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ စွဲလမ်းစိတ်တွေ၊ အတ္တတွေ၊ မာနတွေ၊ လောဘတွေ၊ စည်းစိမ်းတွေကြားမှာ ယစ်မူးအချိန်ကုန်နေတတ်ပြီး မတည်မြဲသောအရာကို တည်မြဲတယ် ထင်မှတ်ကာ ရန်သူမျိုး (၅)ပါးကိုတောင် မကြောက်တော့ဘဲ တတ်မက်နေတတ်ကြပါတယ်။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟောတော်မူတဲ့ စွန့်လွှတ်ခြင်းဟာ မြတ်သောတရားဆိုပေမယ့် တကယ်တမ်းကျတော့ တစ်စုံတစ်ခု၊ […]
မိနျးမတှပေေါတယျ မိနျးမကောငျး မိနျးမမွတျတှေ ရှားလာပွီ ဒီစာလေးကို ဖတျပွီး သငျ့တနျဖိုးကို သငျကိုယျတိုငျ စြေးဖွတျပါ
မိန်းမတွေပေါတယ် မိန်းမကောင်း မိန်းမမြတ်တွေ ရှားလာပြီ သင့်တန်ဖိုးကို သင်ကိုယ်တိုင် ဈေးဖြတ်ပါ ! တက်တူးထိုးတိုင်း မိန်းမပျက် မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လား? ဒါပေမယ့် ဂုဏ်သရေရှိမိန်းမပျိုတိုင်း တက်တူး မထိုးကြဘူး.. ဆံပင် ဆေးရောင်စုံဆိုးတိုင်း မိန်းမပျက် မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လား? ဒါပေမယ့် အဆင့်အတန်းရှိတဲ့ မိန်းမပျိုတိုင်း ပိတုန်းရောင်ကေသာလေးနဲ့ လှကြတယ်… အတိုအဟိုက်တွေ […]
(1) Apple cider vinegarလို့ခေါ်တဲ့ ပန်းသီးအရက် ရှာလကာရည်ကို ဝါဂွမ်းစလေးဖြင့်တို့ယူပြီး မှဲ့ပေါ်သို့ပွက်တိုက်ပေးပါက ၂ရက်အတွင်း ပျောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်မယ်။ (2) Garlicလို့ခေါ်တဲ့ ကြက်သွန်ဖြူ ကို အစေးထွက်အောင်ကွင်းလှီးကာ မှဲ့ပေါ်သို့ကပ်ပြီး ဆေးပလာစတာဖြင့် လေလုံအောင် ဖိ့ကပ်ပေးထားလိုက်ပါ။ရက်အနည်းငယ်အတွင်း ပျောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်မယ်။ (3) Potato လို့ခေါ်တဲ့ အာလူး အစိမ်းကို […]
အဲဒီနေ့က သမီးက သမီးချစ်သူကို အိမ်ခေါ်လာပြီး “အဖေ.. ဒါ သမီးချစ်သူ သမီး သူနဲ့လက်ထပ်မယ်” လို့ ပြောခဲ့တယ်နော်…
သမီး… သမီးကို သူဆင်းရဲမယူနဲ့လို့ အဖေ ဘာကြောင့်ပြောရသလဲ အဲဒီနေ့က သမီးက သမီးချစ်သူကိုအိမ်ခေါ်လာပြီး “အဖေ.. ဒါ သမီးချစ်သူ သမီး သူနဲ့လက်ထပ်မယ်” လို့ ပြောခဲ့တယ်နော်။ နောက်တော့ သမီးကို အဲဒီလူနဲ့သဘောမတူနိုင်ဘူးလို့ အဖေပြောခဲ့တယ်။ ဘာကြောင့်လဲလို့ သမီးမေးတော့ “ဆင်းရဲလို့” လို့ အဖေဖြေတယ်။ အဲဒီတုန်းက […]